Vonona ny hampifandray an'i Kanada sy Etazonia hatrany ny Air Canada miaraka amin'ny sidina isan'andro hatramin'ny 220
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Vonona ny hampifandray an'i Kanada sy Etazonia hatrany ny Air Canada miaraka amin'ny sidina isan'andro hatramin'ny 220
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fandaharam-potoanan'ny varotra Air Canada dia azo ahitsy arakaraka ny takiana amin'ny làlan'ny COVID-19 sy ny fameperana ataon'ny governemanta.
Ny fandaharam-pitan'ny sisintany mamaky sisintany indrindra any Etazonia sy Etazonia dia manohana ny toekarem-pirenena.
Ny fandaharam-potoana fahavaratry ny Air Canada amin'izao fotoana izao dia misy zotram-55 sy toeran-kaleha 34 any Etazonia
Ny Air Canada App dia ahafahan'ny mpanjifa manara-maso tsara, mampakatra ary manamarina ny valin'ny fitsapana COVID-19 nitarina tamin'ny sidina rehetra avy any Etazonia mankany Canada.
Air Madagascar androany dia nanambara ny fandaharam-potoanan'ny trans-border amin'ny fahavaratra ankehitriny, ao anatin'izany ny zotra 55 sy ny toerana 34 any Etazonia, miaraka amin'ny sidina 220 isan'andro eo anelanelan'i Etazonia sy Kanada. Ny fandaharam-potoana vaovao dia mifanojo amin'ny famahana ny fameperana ny dia eo amin'ny firenena roa tonta hatramin'ny 9 aogositra 2021, ahafahan'ny Amerikanina vita vaksiny feno hiditra any Kanada amin'ny dia lavitra tsy ilaina sy ny fanesorana ny fepetra takiana amin'ny hotely misy quarantine, fitakiana fitsapana milamina mamela ny Kanadiana handray fohy dia lavitra noho ny 72 ora hanaovana fitsapana mialoha ny fidirana any Canada, ankoatry ny fepetra hafa hanamorana ny fameperana.
“Ny fanalefahana ny fetra fitsangatsanganana nambaran'ny governemanta federaly androany dia dingana iray lehibe miorina amin'ny siansa, ary faly izahay manangana ny tambajotran'i Kanada-Etazonia. Kanada sy Etazonia dia mizara fifandraisana akaiky sy mamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny rivotra no hitondra amin'ny fanarenana ara-toekarena ny firenena roa tonta. Air MadagascarNy fomba amam-panao mampirehareha ny maha-mpitatitra vahiny lehibe indrindra eto Etazonia dia hita taratra amin'ny fandaharam-potoananay izay novolavolaina mba hanomezana safidy maro isan-karazany ho an'ny mpanjifa amin'ny firenena roa tonta, manintona ireo mpanjifa kanadiana liana amin'ny fitsangatsanganana any amin'ny toerana malaza any Etazonia, ary any Etazonia. mponina mitady hitsidika sy hijery ny zava-mahaliana sy fahaiza-mandray vahiny any Canada. Ny fandaharam-potoananay dia mamela ihany koa ny fitsangatsanganana an-dàlana mamakivaky ny ivon-tanànan'i Toronto, Vancouver ary Montreal mankany sy amin'ny toeran-kalehantsika manerantany. Izahay dia mikasa ny hamerina amin'ny laoniny ny serivisy amin'ireo toerana 57 naleha tany Etazonia teo aloha, raha mamela izany ny fepetra. Manantena fatratra ny fandraisana ireo mpanjifantsika an-tsambo izahay, ”hoy i Mark Galardo, filoha lefitra zokiny, ny fandrindrana ny tambajotra ary ny fitantanana vola miditra ao amin'ny Air Canada.
"Faly izahay amin'ity fanambarana ity ary manantena ny handray ireo mpitsangatsangana avy any Etazonia izahay," hoy i Marsha Walden, filoha sady tale jeneralin'ny Destination Canada. “Avy amin'ireo tanànantsika velona tototry ny natiora ka hatrany an'efitra sy morontsiraka mahatalanjona ka hatrany amin'ny mozika tsy manam-paharoa an'ny kolontsaina vazimba sy manerantany, isan'andro dia manome traikefa vaovao sy fotoana hifandraisana amin'ny zava-dehibe i Kanada. Vonona handray ny sakaizantsika Amerikanina ny ekipa Canada! ”
Ny vahaolana nomerika vaovao amin'ny alàlan'ny Air Canada App dia manamora ny fangatahana antontan-taratasy mifandraika amin'ny COVID-19
Air Canada dia namolavola vahaolana nomerika vaovao amin'ny alàlan'ny Air Canada App, ahafahan'ny mpanjifa manidina avy any Etazonia mankany Canada sy eo anelanelan'i Kanada ary mifantina toerana itodiana any Eoropa mba hijerena sy hampidina ny valin'ny fitsapana COVID-19 ho fanamafisana ny fanarahana ny fepetra takian'ny governemanta alohan'ny tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina.